Izintaba eziyi-10 eziphakeme kunazo zonke emhlabeni izintaba eziyi-10 ezinde kunazo zonke emhlabeni | Izindaba Zokuhamba
Sonke siyazi ukuthi kuyini Intaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni… Kodwa bangaki kithi abazi ukuthi iyiphi intaba yesibili noma yesithathu noma yesine ephakeme kunazo zonke emhlabeni? Udumo luyikho konke, okungenani kuleli zwe ukuthanda izinto ezibonakalayo futhi kusekelwe empumelelweni okufanele siphile ngayo.
Kepha kunjalo, kukhona umhlaba wezintaba ngemuva kweNtaba i-Everest, intaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni, futhi uyakholelwa noma cha izintaba eziyishumi eziphakeme kunazo zonke emhlabeni zonke zise-Asia. Ingabe siyayazi?
1 INtaba i-Everest
2 INtaba iKarakoram
10 U-Annapurna I
INtaba i-Everest Ingamamitha angu-8.848 ukuphakama futhi iseHimalaya, eTibet, isifunda esizimele saseChina. Abantu baseYurophu bokuqala ukuyigibela kwakunguTenzing Norgay noSir Edmund Hillary, ngo-1953.
I-Everest inezincwadi, ukuqoqwa kwezithombe, kanye nama-movie. Futhi kulezi zinsuku akukho ukuswela kwalezo zithombe ezilahla ukuthi phezulu kwayo sekuyinto efana neMecca. Futhi kunabantu abaningi kakhulu abenza ulayini ukufika lapho okusabisayo!
Unyaka nonyaka, ngenkathi yokuqwala, abantu bavela kuwo wonke umhlaba abazama ukuhlangana, kwesinye isikhathi ngenhlanhla futhi kwesinye isikhathi hhayi, iBase Camp enephezulu. Labo abangakutholi lokho kuphakeme basakujabulela ukukhuphuka okunzima okuya ekamu uqobo.
Le ntaba iphakathi kwePakistan neChina futhi ilinganisa amamitha ayi-8.611 XNUMX. Imvamisa ifushaniswa ngegama K2 futhi igama linikezwa ngombhalo osetshenziswa yiGreat Trigonometric Survey yaseBritish India. Ngaleso sikhathi kubonakala sengathi intaba yayingenalo igama elifanele, ngakho lelo gama lahlala likhona.
Abaningi babiza le ntaba ngokuthi «eyasendle» futhi empeleni, uma ubone inguqulo entsha yefilimu iLimit Point (Iphuzu Lokuqhekeka), kuzobukeka ujwayelekile kuwe. I-movie yama-90s, edlala noKeanu Reeves, yayinama-surfers ayingozi njengabalingisi bayo kodwa Remake ama-surfers aba abagibeli. Futhi lapho iK2 yenza ukungena kwayo.
Kubhekwa njenge- intaba enzima, kunzima ukukhuphuka, kakhulu ukwedlula udadewabo omdala. Kubukeka sengathi i-K2 tInesilinganiso sokufa sesibili ngokuya ngokwenyuka phakathi kwazo zonke izintaba ezingamamitha angama-800 ukuphakama. Kubulawe abantu abangu-77 ekukhuleni okuphumelele okungu-300 okuphezulu.
Olunye ucezu lolwazi: phezulu akuzange kufinyelelwe ebusika kuze kube ngu-2020.
Le ntaba ingaphakathi kwezintaba zaseHimalaya, phakathi kweNepal neNdiya, futhi ingamamitha ayi-8.586 XNUMX ukuphakama. Iziqongo zayo ezintathu zisemngceleni phakathi kwalezi zizwe ezimbili kanti ezinye ezimbili zingaphakathi kwesifunda saseTaplejung, eNepal.
Lona kwakuyintaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni kuze kube ngu-1852 Futhi hhayi ngoba ubukhona noma ukuphakama kwe-Everest kwakungaziwa, kepha ngoba izibalo zazenziwe kabi. Ngemuva kocwaningo olusha kwatholakala ukuthi, empeleni, iNtaba iKangchenjunga yayingeyona ephakeme kunazo zonke emhlabeni ... uma kungeyona eyesithathu!
Futhi eHimalayass, phakathi kweNepal neTibet. Inamamitha ayi-8.516sy impela iyintaba edume kakhulu ngoba kusondele kakhulu ukukhweza i-everest. Umzila oya esiqongweni seLhotse uyefana okhuphukela e-Everest, usuka e-Everest Base Camp, uze udlule ku-Camp 3, bese uya ngase-Reiss Corridor usuka eLhotse Face, kusuka lapho kufikwa khona ingqungquthela.
Singasho ukuthi iLhotse yinto efana ne- umfowabo omncane ka-Everest. Ayikhangi kangako ngakho-ke ihlala igcwele kakhulu.Isiqongo sayo esikhulu saqala ukufinyelelwa ngonyaka we-1956, kanti okwaziwa ngokuthi yiLhotse Middle kwahlala isikhathi eside, amashumi eminyaka, kungahlolwa. Ekugcineni, yafinyelela esicongweni sayo ngo-2011, ngohambo lwaseRussia.
Le ntaba isezintabeni zaseHimalaya, futhi phakathi kweNepal neTibet, futhi ingamamitha ayi-8.485 XNUMX. Kuyintaba yesithathu ukudlula amamitha ayi-8000 e-Everest massif, eNepal. Uhambo lwaseFrance lwafinyelela inani eliphakeme ngo-1955 okokuqala ngqa.
Kwakubaluleke impela ngoba ingqikithi yabahloli bamazwe abayishumi yasukuma lapho, lapho into ejwayelekile ngaleso sikhathi ukuthi oyedwa noma ababili beqembu lonke babenenhlanhla leyo.
KuseHimmaya, phakathi kweNepal neTibet, futhi ingamamitha ayi-8.188 XNUMX. Inesikhundla sesithupha phakathi kwezintaba eziphakeme kakhulu emhlabeni futhi ingeyesine eqenjini elikhethiwe lezintaba zamamitha ayizinkulungwane eziyi-8.
Kuyintaba "enhle", ngoba yize iphakeme kungenye yezinto ezilula kakhulu ukukhuphuka. Kungani? Ngoba imithambeka yayo imnene futhi iphakama kancane kancane. Ngaphezu kwalokho, useduze ne-Nang La Pass, amakhilomitha ambalwa ukusuka kulo mzila wokuhweba odumile phakathi kweTibet neKhumbu Sherpas.
Le ntaba useNepal futhi ungamamitha ayi-8.167 XNUMX. Kubukeka kulula kakhulu futhi kwaqala ukubanjwa phezulu ngoMeyi 13, 1960. Idume kakhulu ngaphakathi kwe-Annapurna Circuit ngoba ibukeka iphelele.
Isekethe ye-Annapurna, uma uthanda ukuhamba ngezinyawo, into engcono kakhulu ongayenza. Kungumzila omkhulu ezintabeni zeHimalaya ohlanganisa amakhilomitha ayi-145 enendawo enezintaba. Dlula i-Thorong-La pass, ngamamitha angu-5.416 ukuphakama, iphasi lokuhamba eliphakeme kunawo wonke emhlabeni, ungena eKali Gandaki Canyon, okujule kakhulu emhlabeni, kujule kathathu kuneGrand Canyon ...
Noma kunjalo, intaba ihlukanisiwe, ihlukaniswe nomhlaba ofanayo ngomhosha ofanayo, ngakho-ke ikhadi leposi liyamangaza kakhulu futhi linamandla.
Intaba IseNepal futhi ifinyelela kumamitha ayi-8.163 ukuphakama. Igama layo livela eSanskrit «manasa«, Okusho ukuthi umphefumulo noma ubuhlakani. UToshio Imanishi noGyalzen Norbu bazama okokuqala ukufinyelela phezulu kwabo ngoMeyi 9, 1965, ohambweni lwaseJapan.
Isikhumba sakhe sasingenampikiswano. Kubukeka sengathi abantu bendawo baxwayise amalungu omkhankaso ukuthi angafiki esicongweni sayo yonke into, ngoba imizamo yangaphambilini ibicasule onkulunkulu futhi yaveza ama-avalanche abulale abantu abangu-18 ...
Lo mkhankaso unikele ngemali yokwakha kabusha isigodlo esichotshoziwe, kepha asibanga nenhlanhla futhi le ngqungquthela yafinyelelwa kuphela emkhankasweni omusha waseJapan kepha ngo-1971.
Le ntaba ende IsePakistan futhi ingamamitha ayi-8.126. Kungaphakathi kwesifunda seDiamer, esifundeni saseGilgit Baltisan, entshonalanga yeHimalaya. Igama layo futhi livela eSanskrit futhi lisho ukuthi "intaba enqunu."
Kuyinto a intaba ephakeme, ezungezwe isigodi esiluhlazayonke indawo. IRupal Face yinhle, inokuphakama kwamamitha angu-4.600 ukusuka kusisekelo sayo.
Le ntaba useNepal futhi ungamamitha ayi-8.091 XNUMX. Ingenye yezintaba ezaziwa kakhulu emhlabeni futhi kungenxa yesekethe yokuhamba esasikhulume ngayo ngaphambili. Kungaba sesikhundleni se-10 kodwa ngeshwa inezinga eliphakeme kakhulu lokufa phakathi kwabaqwala izintaba kulo lonke uhlu esivele sikuhlu.
Imizamo engama-32% yokufinyelela ekugcineni ekugcineni ekufeni. Isifunda esikwenzayo sizungeza intaba futhi sinikeze imibono ukusuka eDhaulagiri kuye ezindleleni zezintaba ze-Annapurna Massif. Kunemizila eya e-Annapurna Sanctuary, okungeyona enye ngaphandle kwe-Base Camp, ukuqhubeka nokukhuphuka iziqongo zayo, ezithandwa kakhulu.
Kuze kube manje siza nezintaba eziyi-10 eziphakeme kakhulu emhlabeni. Uyazi ukuthi iyiphi inombolo 11? Intaba yeGasherbrum I, emngceleni ophakathi kweChina nePakistan, unamamitha ayi-8.080.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Izintaba eziyi-10 ezinde kunazo zonke emhlabeni